यस्तो खेलः संसारभरीका फुटवलप्रेमीहरुले पर्खिरहेका छन - Durbin Nepal News
यस्तो खेलः संसारभरीका फुटवलप्रेमीहरुले पर्खिरहेका छन ब्राजिल कि अर्जेन्टिनाः प्रतिक्षा एउटा ऐतिहासिक सेमिफाइनलको
बद्रि गौतम १५ असार २०७६, आईतवार ०३:२८
बद्रि गौतम, दूरबिन नेपाल जुन २९
जुलाई दुई तारिख मंगलबारको राती आठ बजेर ३० मिनेटको समय फुटवल संसार एक पटक टक्क रोकिनेछ । फुटवल प्रेमीहरुको ढुकढुकी बढ्नेछ । नबढोसपनि किन ? विश्व फुुटवलका दुई महारथी एक आपसमा जो भिड्दैछन । कोपा अमेरिका २०१९ को सेमिफाइनलमा जब अर्जेन्टिना र ब्राजिल भिड्दैछन भने त्यो खेलको प्रतिक्षा कुन फुटवलप्रेमीलाई नहोला र ? फुटवलका अधिकांश दर्शकहरु अर्जेन्टिना र ब्राजिलका समर्थक छन ।
ब्राजिल र अर्जेन्टिना फुटवलका महारथी नै हुन त ?
यो प्रश्नमा खासै बहसको जरुरी छैन । किनकी जहां फुटवल छ त्यहाँ ब्राजिल र अर्जेन्टिना नहुने कुरै भएन । ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबिनाको फुटवलमा जित हारको आवेग त होला तर कला चैै हुंदैन भन्छन फुटवलका विश्लेषकहरुपनि । हुन पनि हो विश्व फुटवलमै पनि यी दुई मुलकको दमदार उपश्थिती छ । क्लव फुटवल त यि दुइ देशका खेलाडीबिना अधुरोनै हुन्छ होला । स्पेनिस ला लिगा, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग, इटालियन सीरीए, बुण्डेस लिगा वा लिग वान नै किन नहोस । यी नामचलेका क्लव स्तरीय प्रतियोगितामा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका खेलाडीको उपश्थितीमात्रै होइन, प्रदर्शनपनि प्रभावशाली छ । फेरी आफुलाई फुटवलको जननी मान्ने युरोपीयन मुलुकहरुलाई पराजयको स्वाद यदि कसैले खुवाउन सक्छ भने त्यो अवस्य अमेरिकी महादेश नै हुन्छ । त्यसमापनि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु । अझ ब्राजिल र अर्जेन्टिनासंग प्रतिष्पर्धा हुदैछ भने मन कसरी शान्त रहला ? तथ्यलेपनि यही पुष्टि गर्छ । अल टाइम फेवरेट अर्थात विश्व फुटवलमा संधै रुचाइने यि दुई मुलुक जब एक आपसमा भिड्दैछन भने फुटवल विश्वले आप्नो ध्यान यसैमा केन्द्रित गर्ने नै भयो ।
यि दुई मुलुकको फुटवल सम्बन्ध कस्तो छ त ?
भुगोलको हिसाबले ब्राजिल र अर्जेन्टिना सिमाना जोडिएका निकै नजिकका छिमेकी मुलुकहरु हुन । तर फुटवलका हिसाबले भने महाशत्रु वा चिर प्रतिद्वन्दी । यि दुई मुलुकका विचमा हुने फुटवल त खेल हैन दक्षिण अमेरिकी युद्ध नै भनिन्छ । सीएननको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने संसारभरी हुने प्रतिष्पर्धामा यि दुई मुलुकको प्रतिष्पर्धालाई दुई नम्बरमा राखेको छ । यति सम्मकी यि दुई मुलुकमध्ये एकसंग यदि कुनै तेुस्रो मुलुक भिड्दै छ भने अर्को देशका समर्थक तेस्रो मुलुकको पक्षमा हुन्छन चाहे जस्तो सुकै होस । यस्तै एउटा पछिल्लो उदाहरण छ । सन २०१४ को विश्वकपको सेमिफाइनलमा जब ब्राजिल जर्मनीसँग ७ एक गोलले पराजित भयो अर्जेन्टिनामा खुशीको र्याली निष्कियो । त्यस्तै जब फाइनलमा जर्मनीले अर्जेन्टिनालाई हरायो तब ब्राजिलियनहरु आफुलाई सात गोल हानेको जर्मनीको समर्थनमा उत्रिए । यि दुई मुलुकहरु संधै को उत्कृष्ट भन्ने दौडमै छन । फेरि अर्जेन्टिना र ब्राजिलमध्ये कुन मुलुक उत्कृष्ट हो भन्ने छुट्याउन फुटवल पण्डितहरुलाई पनि मुस्किल पर्छ । फुटवलको ग्राफमा हेर्ने हो भनेपनि यि दुवैको अवस्थामा खासै भिन्नता छैन पनि । विश्वकपमा ब्राजिल हावी छ भने कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिना झण्डै दुइगुणाले अघि छ । ब्राजिलले पेले, गारिन्चा, रोमारियो, रोनाल्डो, रिभाल्डो, रोनाल्डिनो तथा नेमार जस्ता विश्व फुटवलले सदाबहार सम्झिने खेलाडी उत्पादन गरेको छ भने अर्जेन्टिनालेपनि लिओनल मेसी, डियगो म्याराडोना, मारियो केम्पस, ग्राबियल बाटिष्टुटा, सिमोनी, भेरोन जस्ता खेलाडी उत्पादन गरेको छ ।
उत्कृष्टः ब्राजिल या अर्जेन्टिना ?
जहां अर्जेन्टिना र ब्राजिलबिच फुटवल हुन्छ त्यहाँ उत्कृष्ट कलापनि हुन्छ । उत्कृष्ट फुटवलको सुन्दर नमुना हेर्न पाइने अपेक्षा हुन्छ । हुन पनि हो । एक पटक पेलेले भनेका थिए । युरोपियनहरु शरीरले फुटवल खेल्छन, तर अमेरिकीहरु मनले फुटवल खेल्छन, उनीहरुको नशानशामा फुटवल हुन्छ । त्यसैले होला अमेरिकी फुटवललाई उत्कृष्ट मानिएकोपनि । आपसी भिडन्तको इतिहासलाई केलाउंदा यि दुई मुलुक एकापसमा सन १९१४ मा पहिलो पटक भिडेका थिए । सो बेला अर्जेन्टिनाले ३ शुन्यले जितेको थियो । त्यसपछि अहिले सम्म एक सय नौ पटक दुइ मुलुक आपसमा भिडेका छन । जसमा ब्राजिलले ४५ पटक जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले ३९ पटक बाजी मारेको छ । २५ खेल बराबरीमा टुंगीएका छन । यो अवधीमा गोल भने अर्जेन्टिनाले धेरै गरेको छ । अर्जेन्टिनाले एक सय ६६ गोल गरेको छ भने ब्राजिले एक सय ६५ गोल गरेको छ ।
मुख्य प्रतिष्पर्धाको उपाधि दुवैका बराबर
मुख्य प्रतिष्पर्धा अर्थात विश्व स्तरीय प्रतिष्पर्धामा अर्जेन्टिना र ब्राजिलले समान १७ पटक उपाधी जितेका छन । विश्वकपको उपाधि ब्राजिलले पाँच पटक जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले दुई पटकमात्र जितेको छ । तर कोपा अमेरिका कपको उपाधि भने ब्राजिल भन्दा अर्जेन्टिनाले धेरै जितेको छ । १४ पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि अर्जेन्टिनाले जित्दा ब्राजिलले आठ पटकमात्र जित्न सकेको छ । फिफा कन्फेडेरेसन कप ब्राजिलले ४ पटक जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले एक पटकमात्र जितेको छ ।
उमेर समुहको उपाधिमा ब्राजिल अगाढी
उमेर समुहका ३२ उपाधि ब्राजिललले जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले १६ उपाधि आप्mनो पोल्टामा पारेको छ । उमेर समुहको पाबन्दिमा खेलाइने ओलम्पिक फुटवल ब्राजिलले एक पटकमात्र जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले दुई पटक जितेको छ । २० बर्ष मुनिको फिफा विश्वकप अर्जेन्टिनाले ६ पटक र ब्राजिलले ५ पटक जितेको छ । त्यस्तै १७ बर्ष मुनिको विश्वकप तीन पटक ब्राजिलले जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले अहिलेसम्म जितेको छैन । दक्षिण अमेरिकी युथ फुटवलको उपाधी ब्राजिलले ११ पटक र अर्जेन्टिनाले पाँच पटक जितेका छन । दक्षिण अमेरिकी १७ बर्ष मुनीको उपाधीपनि ब्राजिलले १२ पटक जित्दा अर्जेन्टिनाले तीन पटक मात्र जितेको देखिन्छ । यि दई देशबिच खेलिएका ६० मैत्रीपुर्ण खेलमा ब्राजिलले २५ पटक र अर्जेन्टिनाले २० पटक जितेका छन । तर समग्र संख्यात्मक नतिजामा ब्राजिल केही अघि देखिएपनि यसलाई फुटवलमा बलियो प्रतिष्पर्धानै मानिन्छ । अर्को तर्फ विश्व फुटवलका सर्वकालिन खेलाडीद्वय पेले र म्यारोडोना जस्ता खेलाडी जन्माउने मुलुकबिचको खेल भएकालेपनि संधै प्रतिष्पर्धात्मक र रोचक हुने गर्छ । विश्व फुटवल फेरि एकपटक टक्क रोकिनेछ जुलाई दुइ तारिख ब्राजिलको स्थानीय समय अनुसार रातको आठ बजेर ३० मिनेटमा ।
१५ असार २०७६, आईतवार ०३:२८ मा प्रकाशित